Solved13.94K views June 25, 2022 Amaphupho
Mabuza666	 May 13, 2021 8 Comments
Anonymous Posted new comment June 25, 2022
Nomvula mthalane commented April 1, 2022
Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha amanzi amaningingi ahambayo
Zama commented April 28, 2022
Ngiphuphe kuvuleleke amanzi eBathroom iStopper sivalile, manginhena endlin ngyzwa ukuth amanzi ayahaza aseyagcwala asezophumela e-passage ngaphuthuma ngisizwa ingane yasekhaya ngavula iStopper, ngavala impopi amanzi ancipha aze aphela.
sindi (anonymous)	 Posted December 22, 2021	 0 Comments
amaphupho ngokulunwa inyoka
sindi Answered question December 22, 2021
BM (anonymous)	 Posted May 14, 2021	 0 Comments
BM Answered question May 14, 2021
Menzi (anonymous)	 Posted May 14, 2021	 0 Comments
Emfuleni kulapho kuhlala khona amadlozi amabili, umfula ungase ukhombe ukuthi useduze nedlozi, kungase kube izinkomba zokuthi kumele uthwase. Ukuphupha amanzi empophoma/impophoma kungachaza imimoya yokuthi unamadla okuba ngumthandazi noma unemimoya yokuba yisangoma. Amanzi asetshenziselwa ukuhlamba/ukuwasha/ukukilina leliphupho lingachaza futhi ukuthi ukilini.
ukuphupha ulwandle engathi uyabhukunda kulona – kuchaza ukubusiswa yidlozi futhi kungasho inhlanhla. Read more dreams below
Menzi Answered question May 14, 2021
Anonymous	 Posted May 14, 2021	 0 Comments
Ukuphupha amanzi akuyona into okufanele ikujabulise ngoba amanzi awuphawu lokungaqondakali. Uma sikhula siyawajwayela amanzi ezimweni eziningi ezahlukene. Kwesinye isikhathi siyawaphuza, siyageza ngawo, siyawasha okungcolile ngawo futhi sisenokwenza imicimbi yobungoma namasiko ngamanzi.
Ukuphupha Amanzi – Incazelo
Kuyehlukake ukuphupha amanzi ngoba kuya nangokuthi ebenjani njengoba ukuwaphupha nje. Amanzi indalo yawo ayashintsha isimo sawo uma esesetshenzisiwe. Kodwa noma esenze ini ekugcineni ahlale engamanzi nje. Sikuchazile ke futhi ukuphupha ulwa ukuthi kusho ukuthini
Kuyenzeka ke uwaphuphe engcolile noma uwaphuphe ehlanzekile. Usenokuwaphupha emile nje eyixhaphozi futhi ungawaphupha egobhoza. Abanye bawaphupha encolile esesizibeni noma futhi encolile egobhoza. Zonke lezizimo zamanzi zinezincazelo esingeke sakwazi ukuzichaza zonke kulokhukubhala. Kodwa khona ukuphupha amanzi yinto okufanele uyisukumele ngokuya ngokubaluleka kwephupho lakho.
Ukuphupha amanzi ewudaka olumnyama kungasho isifo ozosizwa noma kungasekhona nje emndenini wakho. Kwesinye isikhathi kungasho ukuthi kukhona othakathayo emndenini wakho ophehla amanzi amnyama. Okunye esibhale ngakho okubalulekile wukuthi kusho ukuthini ukuphupha indoda yakho imithisile uma ungumuntu wesifazane
Ukuphupha Amanzi Adungekile
Kuhlukene ukuphupha amanzi adungekile ngoba kuya ngesimo owaphupha kuso. Kuyenzeke abike intwaso, inhlambuluko noma isichitho.
Ukuphupha Amanzi Echitheka
Lokhu kungasho isimo sento oyilungisayo noma oyisebenzayo ihlakazeka bese ingaphumeleli.